1954-1964 Evinrude ဂျွန်ဆင် 5.5 HP က Tune UP စီမံကိန်း | ပဲ့ချိတ်လှေမော်တော်ပြုပြင်ခြင်း
1954-1964 Evinrude ဂျွန်ဆင် 5.5 HP က Tune UP စီမံကိန်း
1954-1964 Evinrude နှင့်ဂျွန်ဆင် 5.5 HP ကပဲ့ချိတ်လှေမော်တာ မော်ဒယ်နံပါတ်ကိုးကားစရာ။ အဆိုပါမော်ဒယ် number ကိုများသောအားဖြင့်အင်ဂျင် bracket ကဆိပ်ကမ်းဘက်မှာတပ်ဆင်ထားသည်။ သင်မော်ဒယ်အရေအတွက်ရှိသည်နှင့်တပြိုင်နက်ထဲမှာသင့်ရဲ့မော်တာများအတွက်တစ်နှစ်ရှာတွေ့ မော်ဒယ်နံပါတ်ကိုးကားစရာ.
ဒီမှာ အဆိုပါဖြစ်ပါသည် သင်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်အစိတ်အပိုင်းများစာရင်း ထညှိရန်သင့် 1954-1964 Evinrude နှင့်ဂျွန်ဆင် 5.5 HP ကပဲ့ချိတ်လှေမော်တာ.
ဒါ့အပြင်ထုတ်စစ်ဆေး 5.5 HP ကဂျွန်ဆင် 1960 မော်ဒယ်, CD-17 စတော့ဟုမ်း, ဆွီဒင် - Boss "ဟုဦးဘို" Petersson နေဖြင့်စီမံကိန်း